Nooca canjeerada ah ee balanbaalisyada
Double Double waalka filtarka
Noocyada lugaha ee balanbaalisyada balanbaalis
Qalab saddex-geesood leh oo balanbaalis ah
U fallaaraha balanbaalis balanbaalis
Waxqabadka sare ee balanbaalis
Flange & rakiban
Double matoorrada balanbaalis balanbaalis
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada waalka balanbaalis
Faa'iidada 1. Way ku habboon tahay oo dhaqso badan tahay in la furo oo la xiro, iyadoo leh dheecaan hooseeya iyo hawlgal fudud. 2. Qaab dhismeed fudud, cabir yar, dherer qaabdhismeed gaaban, mug yar, miisaan fudud, oo ku habboon waalka waalka weyn. 3. Way qaadi kartaa dhoobada waxayna ku keydin kartaa dareeraha ugu yar afka dhuumaha. 4. ...
Balanbaalis mabda'a shaqeeya
Waalka balanbaalis waa nooc ka mid ah waalka oo isticmaala nooc disc disc furitaanka iyo xiritaanka qaybaha in ay isku shaandheyn ku saabsan 90 ° in la furo, xirto ama nidaamiso socodka dhexdhexaad ah. Waalka balanbaalisku maahan oo kaliya qaab fudud, cabir yar, culeys fudud, ku yar isticmaalka maaddada, yar cabirka rakibaadda, yar wadista ...
Hordhaca waalka waalka
Alwaaxda 'Gate valves Gate valves' ayaa ugu horreyn loogu talagalay inay bilaabaan ama joojiyaan socodka, iyo marka socodka toosan iyo xadka socodka ugu yar loo baahan yahay. Marka la adeegsanayo, filtarkaani badanaa si buuxda ayey u furan yihiin ama gebi ahaanba xiran yihiin. Ka dib markaad si buuxda u furto saxanka waalka albaabka, ka saar. Saxanka si buuxda ayaa loo sawiray ...
Waa maxay waalka? Waalka waa qalab farsamo oo xakameynaya qulqulka iyo cadaadiska nidaamka ama nidaamka. Iyagu waa qaybaha aasaasiga ah ee nidaamka dhuumaha gudbiya dareeraha, gaaska, uumiga, dhoobada, iwm. Waxaad bixisaa noocyo kala duwan oo filtarka ah: waalka albaabka, waalka joojinta, waalka fur, ...
Hordhaca waalka balanbaalis
waalka balanbaalis balanbaalis waalka quarter wareega waalka dhaqdhaqaaqa Rotary loo isticmaalaa in lagu joojiyo, nidaaminta iyo bilaabaan socodka. Balatarka balanbaalisku waa fududahay in la furo. Wareeji xajinta 90 ° si aad si buuxda u xirto ama u furto waalka. Balatarka balaaran ee waaweyn waxaa badanaa lagu qalabeeyaa waxa loo yaqaan gearbox, wh ...
Aagga Warshadaha Guaizigou, Xiaozhan Town, Degmada Jinnan, Magaalada Tianjin, Shiinaha.